Shirka Farmaajo uu ku baaqay oo markii 4aad qarka u saaran fashil | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Farmaajo Talo ayaa ku caddaatay, wuxuu isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada markii 4-aad.
MUQDISHO, Soomaaliya - Farmaajo iyo taliyihiisa Nabad Sugidda Fahad Yaasiin talo ayaa ku caddaatay, haddii ay isku dayeen tallaabo kasta in ay u qaadaan sidii ay u boobi lahaayeen doorashada madaxtinimada Soomaaliya sanadka 2021 wey usuurta gali la'dahay, welina kama quusan qorshahaas oo damacii boobka weli wuu ku jiraa iyagoo ku adkeysanaya in ay doorasho qabtaan.
Saddex shir oo hore ayuu madaxweyne Farmaajo isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka, waxaa ajiibay oo diyaarad soo raacay markii ay afkiisa kasii dhammaaneysay qabashada shirka saddex madaxweyne oo kala ah Madaxweynaha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, kuwaasoo dhammaantood lagu soo dhaweeyay iyagoo kursi madaxweyne dowlad goboleed, loona boobay iyadoo ay eeganayaan dadkii wax kulahaa talada kuraastaas.
Waxaa mar walba meesha ku jira oo boos buuxis ahaa guddoomiye ka duwan kuwa dowlad goboleedyada, waxa uu ku yimid kursiga magacaabis Guddoomiyaha gobolka Benaadir Cumar Filish, dhammaan fadhiyadii ugu dambeeyayna wuu kasoo qeyb galay inkastoo billowgii shirkii Dhuusamareeb1 iyo 2 aan lagu casuumin, balse Farmaajo oo u baahan in loo buuxiyo kuraasta ayaa qorsheeyay in uusan ka maqnaan fadhiyada shirarka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Waxaa saddexda kulan ee hore iska diiday labada madaxweyne dowlad goboleed ee ku haybta ah madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo, waxayna ku xireen ka qeyb galka shira shuruud ay adagtahay fulinteeda, taasoo madaxweyne Farmaajo uu ka wareegsanayo xal uheliddeeda, waxaana horay u dhicisoobay qorshe ay doonayeen kooxda Farmaajo in ay ku qabtaan doorasho saddex dowlad goboleed iyo gobolka benaadir oo keliya ah.
Shalay ayuu Farmaajo isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada, waxaana sidii caadada ahayd iska diiday madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Deni iyo Axmed Madoobe, waxay sheegeen in ay u cabsanayaan amnigooda, waxayna dalbadeen in lagu qabto xerada Xalane, halkaas oo ay maamulaan ciidamada AMISOM kuna sugan yihiin beesha caalamka.
Shaki kuma jiro inuu mar afaraad baaqan doono, iyadoo tanaasul laga la'yahay Farmaajo, Beesha Caalamkana ay ku qasbeyso inuu shir isugu keeno madaxda dowlad goboleedyada oo dhan, ayaa haddana waqtigii doorashada la dhaafay in ku dhaw muddo bil ah, saadaasha iyo rajada muuqatana aad ayey u xuntahay.